10 Kasị Mma ubi na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Kasị Mma ubi na Europe
Europe kachasị mma na mmiri. Ugwu na okporo ámá mara mma na-acha mara mma, na-agbanwe akụkụ ọ bụla ka ọ bụrụ ihe osise dị ndụ. Site na ubi French rue ubi ubi ohia nke England na ubi ulo ndi Italia, e nwere ọtụtụ ubi na Europe karịa n'akụkụ ọ bụla ọzọ nke ụwa. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ mmiri ma ọ bụ ezumike oge ezumike na Europe mgbe ị nanị ga-eleta otu n'ime ndị a 10 ubi kacha mma mara mma na Europe.
Isi iyi mmiri, ala lanụ di iche-iche, mee ka ubi nke Versailles dị elu nke anyị 10 ubi kacha mma mara mma na Europe.
800 hectare ala mejupụtara ogige Versailles. Windzọ a na-agagharị, 35 km nke mmiri na ihe oyiyi, nwee mmasị njem si gburugburu ụwa. Obi abụọ adịghị ya, Versailles bụ nnukwu njem nke ubochi site na Paris, na ozugbo ị rutere, ọ ga-afụ ụfụ site na ya mara mma.
Etu ị ga-esi banye n'ubi Versailles?
Ubi ndị ahụ dị na obodo Versailles, banyere otu awa ụgbọ okporo ígwè si Paris.
2. Keukenhof, Mba netherland
Karịrị 7 nde Dutch tulips na-anabata ndị ọbịa kwa oge opupu ihe ubi ọ bụla na ogige Keukenhof mara mma. Ogige ifuru kachasị na ụwa mepee ọnụ ụzọ ya n'April na Mee. Nke tulips’ okooko osisi bụ otu n'ime ihe kachasị na Netherlands.
Ebe Ndi Ugbo Keukenhof Dị?
Ugbo ndị ahụ dị na Lisse, n'ime obi Bollenstreek. Naanị ọkara elekere site na ụgbọ oloko si Amsterdam.
3. Ogige Villa D'este, Rome .tali
A atụ atụ nke Renaissance na Italy, Ugbo Ville d'Este na Tivoli na-adọrọ mmasị. Ubi a mara mma bu otu n'ime Ebe UNESCO dị na Europe.
Mepee niile n'afọ, ogige nke 1000 isi iyi dị mma 30 kilomita site na Rome. Otu n'ime ihe dị egwu ị ga - ahụ maka ya bụ ogige ogige ama, na isi iyi mmiri na egwu hydraulic.
Uzo esi erute Villa D’este Ogige Na Tivoli?
Tivoli bụ mfe reachable ụgbọ okporo ígwè si Rome na mgbe a ụgbọ ala mgbagharị si ụgbọ okporo ígwè.
4. Ogige Isola Bella, Italy
Ubi Isola Bella dị n'etiti Ọdọ Mmiri Maggiore. Agwaetiti Borrome na Northern Italy, bụ ọmarịcha ihe atụ nke ụlọ eze Baroque na ubi Italiantali.
N'ihi ihu igwe dị nro na Ọwara Borromean, ị ga - ahụ ọtụtụ okooko osisi ndị na - adịghị ahụkebe ma dị egwu na ubi Isola Bella. Na mgbakwunye, ponds, isi-iyi, na ọbụna acha ọcha peacocks ga-mezue pụtara ọnọdụ maka njem gị eserese.
Etu esi erute ogige Isola Bella site na Milan?
Isola Bella gardens bụ a magburu onwe ụbọchị-njem si Milan. Can nwere ike ịga si Milan Central n'ime otu awa ụgbọ okporo ígwè na a ụgbọ mmiri siri nke Stresa.
5. Ugwu Petrin, Prague
Ugwu Petrin bụ ebe ezumike mara mma site na igwe mmadụ ndị njem nleta. Lavish akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, osisi, na ụzọ ndị gbagọrọ agbagọ na-akpọrọ gị gaa echiche dị egwu nke àkwà mmiri na nnukwu ụlọ Prague. Maka echiche obodo agaghị echefu echefu, ịkwesịrị ịga Petrin Hill ụlọ elu dị elu n'okporo ụzọ ndị dị n'ubi.
Ubi Petrin Hill bụ otu n'ime ubi kachasị mma na Europe. Nwere ike iji nwayọ nọrọ jụụ n'ehihie ma ọ bụ n'ụtụtụ dị umengwụ ịnụ ụtọ echiche ndị ahụ.
Otu esi aga Petrin Hill Gardens?
Emi odude ke ufọt Prague, ị nwere ike ịga ije ma ọ bụ were metro gaa n'ubi ahụ site n'akụkụ ọ bụla dị n'obodo ahụ.
6. Ubi Marqueyssac, France
The kasị pụrụ iche ubi na Europe bụ n'ezie ndị suspending ubi nke Marqueyssac na France. Suskwụsịtụ na ndagwurugwu Dordogne bụ ọrụ ebube nke ọ bụla ọzọ karịa Andre le Notre, onye nhazi nke ubi Versailles.
Ihe pụrụ iche nke ubi dị na nka elu elu nke 150,000 osisi ndị a na-eji aka ha edozi, nke dị na ntanetị nke ụzọ dị ka nri. The gardens surround 17th-century chateaux and overlook the Dordogne valley. Maka nleta anwansi, mee atụmatụ njem gị na mgbede Tọzdee, mgbe a na-amụnye ogige site na ọkụ kandụl.
Uzo esi aga na Marqueyssac Gardens?
Ubi ndị ahụ dị n’etiti wine na mpaghara na France. Ubi Marqueyssac bụ a 2 awa ’ ụgbọ okporo ígwè nke Bordeaux.
7. Obí Ludwigsburg, Germany
A maara dị ka Bluhenden Barock na German, nke pụtara Baroque na ifuru, Ludwigsburg Obí Ogige dị ebube. Yiri ogige nke Versailles nke na -eme ala ala eze ahụ mma, ubi a nke German na-agbawa n’oge opupu ihe ubi ọ bụla na Roses, ahihia ndu, and even a Japanese inspired garden with Bonsai trees.
Emere ogige Baroque a na-eme ihe atụ na ụdị French iji kwado ụlọ eze ahụ.
Uzo esi aga na ulo uka Ludwigsburg?
Ogige ahụ dị na mpụga Stuttgart, ọ bụkwa 30 Nkeji oge njem ọha na eze.
8. Ogige Mainau Island, Germany
Ihe mara mma na agwaetiti Mainau okooko osisi bụ na enwere ihe na-eto eto mgbe niile. Ogige a dị ịtụnanya dị na Lake Constance. Ọnọdụ ihu igwe nke ọkara dị mma maka okooko osisi okpomọkụ na ubi okooko osisi Bekee.
E kere ubi ahụ na 19nke narị afọ site n'aka onye isi Nikolaus von Esterhazy. Taa nke a 45 ubi hectare na-anabata nde ndị ọbịa kwa afọ maka ngosi orchid nke na-emepe oge opupu ihe ubi.
Otu esi aga n'ogige Mainau?
Nwere ike iji bọs si ọdụ ụgbọ okporo ígwè Konstanz, ụgbọ ala si n'obodo ndị gbara ya gburugburu, ma ọ bụ ụgbọ ala.
9. Ogige Sigurta Verona, Italy
Ogige Ogige Sigurta bụ Italian paradise. Ebu ụzọ kee ogige a dị egwu dị ka obere ogige gbara gburugburu ebe obibi ndị ọrụ ugbo. With time it expanded to the vast garden it is today. Giardino Sigurta garden is a sanctuary to 1,500 osisi, na otu nde okooko osisi nke 300 ụdị dị iche iche na-agbapụta oge opupu ihe ubi ọ bụla. N'oge okpomọkụ 18 ọdọ mmiri ọdọ mmiri nke ubi ghọrọ ebe nsọ maka ndị obodo na ndị njem si gburugburu ụwa.
Uzo esi aga Parco Giardino Sigurta?
Giardino Sigurta ubi bụ 8 km south of the Lake Garda and 25 kilomita site na Mantua. Nwere ike ịga ụgbọ okporo ígwè si Verona, ma banye ụgbọ ala ahụ gaa Valeggio Sul Mincio.
Rimini ka Verona Zụọ Ahịa
Rome ka Verona Ahịa
Florence na Ahịa Verona
Venice ka Verona Zụọ Ahịa
10. Lerlọ Hallerbos Brussels, Belgium
Otu ugboro n'afọ, Hallerbos ọhịa na Halle, okooko dị ka ogige akụkọ ifo. N'ihi ọmarịcha-acha anụnụ anụnụ, site na mbubreyo Eprel rue etiti onwa Mee ka ala ahihia ghoro ala eze acha anụnụ anụnụ.
Ọzọkwa, Ulo Hallerbos bu ulo ebe mgbada na oke bekee. Naanị otu elekere ụgbọ oloko si isi obodo, ị nwere ike ịbanye n'okporo ụzọ mara mma nke ọhịa na-acha anụnụ anụnụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga leta Belgium na mmiri, cheta ịkwụsị by otu nke mara mma oke ohia na Europe ma buru ije-ije na-aga n'okporo ụzọ na-acha odo odo.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi ezumike gị na 10 kasị mara mma ubi na Europe ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Kasị Mma Gardens Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-gardens-europe/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / tr ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#n'oge okpomọkụ beautifulgardens europegardens EuropeTraveling Frenchgarden Spring travelbytrain